RASMI:Garsoorihii dhex-dhexaadinaayay kulankii u dhaxeeyay Koonfur Afrika iyo Senegal ,oo inta ka dhiman nolashiisa ciyaaraha laga mamnuucay,iyo kulankii u dhaxeeyay labada xul oo dib loo ciyaaraayo.
Sunday, May 27th, 2018 - 18:56:19
Thursday September 07, 2017 - 11:08:09 in Wararka by MM Shooble
Ciyaartii isreebreebka Koobka Adduunka ee u dhaxeysay South Africa iyo Senegal ayaa dib loo ciyaari doonaa,kadibmarkii garsooraha ciyaarta laga mamnuucay noloshiisa inta ka dhiman in uu garsooro ciyaaraha ay maamusho Fifa.
Waxa uu rigoorada u dhigay South Africa markii ay 2-1 kaga badiyeen bishii November ee sannadkii hore kubada gacanta in ay ku dhacday mid uu ku tilmaamay, laakiinmarkii dib loo daawaday ciyaarta ayaa la ogaaday in aykuba daafaca kooxda Senegal ee Kalidou Koulibaly kaga dhacay jilibka.
Cayaartan ayaa la filayaa indib loociyaaro bisha November ee sanadkan 2017.
Lamptey waxaa markii hore laga mamnuucay ciyaaraha ilaaya bisha Maarso, laakiin Arbacadii ayaa go'aanka maxkamadda Xalinta Khilaafaadka ,waxa ay soo saartay qoraal ah in uuna waligiis qaban doonin kulan ay FIFA maamusho inta nolashiisa ka dhiman.
Lamptey, oo sidoo kale ku dhaawacmay ciyaaraha Olimbikada Rio ee sannadkii hore, ayaa hoos u dhigay casuumada BBC Sport ee ku aadan xayiraadda markii hore, ka dib markii uu cabasho ka yimid xiriirka kubadda cagta ee Senegal.
Senegal iyo Koonfur Afrika ayaa haatan ku jira kaalinta seddexaad iyo afaraad ee Group D ee Afrika,waxaa kadambeeya Burkina Faso iyo Cape Verde Islands. Kaliya kooxda ugu sareysa ayaasi toos ah ugu soo bixi doono dhacdada kubada cagta aduunaoo sanaka soo aadan bartamihii lagu qaban doonoRussia.